Yaa Marqaa Si Hafuufuun Si liqimsuuf! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYaa Marqaa Si Hafuufuun Si liqimsuuf!
Abiy waa’ee filannoo irratti akkas jedhe: “Paartileen booda kana filannoo irratti hirmaachuuf fedhi agarsiisan jiru; boordiin filannoo jara kanaaf akka haala mijeessu abdii qaba.”
Kun iccitii hin qabu. Gantoota akak Araarsaa fi Qajeelaa fa’aaf haala mijjeesuu isaa ti.
Kan ummanni keenya tolchee beeka. Daba akkanaan milkaa’uun hin jiru.
Shirichi, isuma balleessa.
Waan facaasan haamamchuun duris tureera; har’as ni jira; egeres ni jiraata!
Haleellaa Naannoo Amaraa saba Oromoo Walloorratti raawwachaa turee fi ammallee raawwachaa jiruuf sagalee keenya olkaafnee dhageessifna!
Bara, 1847 mootummaa gonfoo Tewoodiroosii eegalee sirni bittoota kaabaa keessumaa bittootni Amaaraa fi Tigiree hanga ABUT injifannoo gonfatee darbuutti walsaamicha aangoof tokko isa biraarratti olaantummaa gonfachuuf falmii gidduu isaaniitti taasifamaa ture keessaatti, Oromoon Walloo karaa irra ijjaatanii walitti darban gochuudhaan badii isaa malee yakkamee barootaaf ajjeechaa fi gidduu gala dirree waraanaa ta’uun keessummeesseera, hardhas itti fufee jira. Keessumaa bu’uura aangoo isaa amantaa ortodoksii kan godhate mootiin Tigiraay Yohaannis arfaffaan, saba Oromoo Wallootiin Amantaakoo fudhadhaa cuubamaa kana hin ta’u taanaan, biyyakoo gadi dhiisaa ba’aa! jechuun, amantaa, aadaa, duudhaa, afaan isaaf saba murataa ta’e Oromoo Walloo irraatti murteessuun, qulqulloonni saba Oromoo walloo gara jabeeyyootaan lubbuu isanii dhabanii dhumaatiif saaxilaman
Akkuma mammaksi “Haati nama hin dhalin nama hin dhahin” jedhu, waggoottan 166 hunda, (jarraa 19ffaa bara sirna bittaa mootii Teewoodiroosii eegalee hanga jaarraa 21ffaa bara humna addaa naannoo Amaaraa ammatti), haala baay’ee wol fakkaatuun haleellaan itti fufee jira. Asii olitti akkuma ibsuuf yaallee uummanni Godina addaa Oromiyaa Oromoo Walloo waggoottan 166 garagarummaa amantaa, aadaa, afaanii, barsiifataa(duudhaa) kkf kunuunfatee woliin jiraachuun gargar ta’uu isaa caalaa uummata miidhagina Itophiyaaf iddoo guddaa fi hiika addaa kennaa jiraate ta’uu isaanii namni fayyaa qabuu kamuu hin haalu. Dargaggoon Walloo gumii aartii addaa addan gurmaa’anii oromummaa isaaniitiin, obboloota isaanii Oromoo wajjin, Itophiyaa ta’uu isaaniitiin firoottan isaanii Itophiyaanoota biroo wajjin walitti dhufanii waltajjii hundarratti fakkenymmaa miidhaginaa, fi jaalalaa ta’aniiru.
Oromoon Wolloo murna siyaasa koongireesii Federalawaa Oromoo(KFO) ykn Adda bilisummaa Oromoo (ABO) waan ta’aniif adoo hin taanee Oromummaa fi eenyummaa isaanii calaqqisiisuu qofaaf, carraa eeggatamee sabaabni uumamee fedhii dhiphaa garee bittootaa (aanga’ootaa) guutuuf jecha humna addaa itti bobbasanii uummata nagaan jiraatu gooluun Koongireesii Federalawaa Oromoo baay’ee kan rifaasiisee fi gadisiisee dha. Saba kana maqaa partilee siyaasaa itti maxxansanii bu’aa siyaasaaf rasaasa humna addaatiif saaxiluun seenaanis,seerris, siyaasnis haamileenis (mooralidhanis) dhiifama kan namaaf hin taasifne ta’uu yaadachiisaa, Oromoon Oromoof akka dirmatu, wal bira dhaabbatu dhaamsa keenya dabarsaa, “Naannoo Amaaraa saba Oromoo walloo miidhaan irraatti raawwatamaa turee fi raaawwatamaa jiruuf sagalee keenyaa ol kaasnee dhageessifna.”.
Yeroo dabalataa biraa odoo hin fudhannee humnoonni gochaa duguuggaa sanyii irratti bobba’anii fi boobbasan hundinuu ariitiin seeraa duratti akka dhiyaatan hawaasi addunyaa fi biyyaa keenyaa guutuun nu cinaa dhaabbattanii lammilee keenya bakka kamittuu dhumaa jiran akka baraarru ariitiin waamichaa namooma isin waamna!
Koongireesii Federalawaa Oromoo
Finfinnee Bitootessa, 2013
Mee akkamiin deebisa Abiyyiin gaaffii kana
Ibsa kaleessa Bilxiginnaa damee Oromiyaan baase miidiyaan biyyattii tokkollee hin gabaasne. Kan naannoo sanii otoo ta’e yoona irratti wal cacabsu. Tuffatamaniirtu. Liqimsaa! Isinis sosodaachaatuma Afaan Oromoon qofa maxxansitan. Kun jireenya miti.
Muumichi keesaniis har’a Oromoon dhume hadhumu malee humna addaa naannoo Amaaraa maqaa hin xureesinaa jedheera. Bakka buutonni Walloo lamaan gootummaan roorroo ummata isaanii dubbatan garaa nama nyaatu. Nuuf birmata jedhanii yaadan.
ከሰሜን ሸዋ ኤፍራታ ግድም ወረዳ ልዩ ሃይሉን የሸሹ ከ2 ሺህ በላይ አርጎባ እና ሙስሊም ወሎዬዎች በጅሌ ጥሙጋ ወረዳ ሉጎ ቀበሌ ተጠለው ይገኛሉ ። ከወሰን ቁርቁር አካባቢ ደግሞ በእምነታቸው ጭምር አማርኛ ተናጋሪ ራሱ ከኦሮሞ ጋር ተፈናቅለዋል ።